DHAGEYSO: –Madaxda Dowladda Dhexe Oo loo Jeediyay Eedeyn Kulul - Awdinle Online
DHAGEYSO: –Madaxda Dowladda Dhexe Oo loo Jeediyay Eedeyn Kulul
November 9, 2019 (Awdinle Online) – Shariif Sheekh Axmed Madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo maanta Warbaahinta kula hadlay Muqdisho ayaa eedeyn kulul u jeediyay dowladda Soomaaliya oo sheegay in maanta ay ku xayirtay Garoonka diyaaradaha Muqdisho.
Waxaa uu sheegay in aan loo dul qaadan doonin ficilada dowladda dhexe ee Soomaaliya ee ku aadan Caburinta Shacabka iyo Madaxdii hore, islamarkaana ay qaadi doonaan tilaabadda ku haboon.
“Shariif Sheekh Axmed ayuu yiri sidan Magaladan MOORYAAN ayaa haysatay, waa lala dagaalay WAANA LA BIXIYAY. ITOOBIYAAN ayaa soo galay, waa lala dagaalay WAANA LA BIXIYAY. ALSHABAAB ayaa qabsaday, waa lala dagaalay WAANA LA BIXIYAY. Intaas miyey ka xoog badan yihiin.
WALLAHI, THUMA WALLAHI.
IYAGANA HADII AYSAN JOOJIN WAAN BIXINAYNAA! ”
Previous articleUAE says diplomatic efforts needed for agreement with Iran
Next articleDhageyso :-Madaxweynaha Koonfur Galbeed Oo Ku Wajahan Degmada Waajid